इपान निर्वाचनमा दुई विवाद : सहमतिका ४ विकल्प - UrjaKhabar इपान निर्वाचनमा दुई विवाद : सहमतिका ४ विकल्प - UrjaKhabar
काठमाडौं । विधान अनुसार हरेक तीन वर्षमा हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को कार्यसमिति निर्वाचन यो पटक २०७६ साल माघ ४ गतेभित्र हुनपर्ने थियो । विभिन्न कारणले यही असार १५ गते तोकिएको थियो । तर, निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन १४ गते बेलुका कोभिड कारण देखाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पत्र काट्यो, स्थागित गर्न भन्दै ।
निर्वाचनको अर्को मिति तय भइसकेको छैन । बाहिर हेर्दा कोभिड कारणले निर्वाचन स्थगन भए पनि आन्तरिक विवादले निर्वाचन स्थगन भएको थियो । त्यसैले, इपान निर्वाचन आन्तरिक विवाद नमिलुन्जेल तत्कालै हुने अवस्था छैन ।
इपान जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावली २०३४ बमोजिम २०५७ माघ ४ गते दर्ता भई त्यहाँबाट स्वीकृत विधानका आधारमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था हो । विधानमा उल्लेखित उद्देश्य अनुसार यो संस्था निजी क्षेत्रमा क्रियाशील ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको साझा संस्था हो । जसको नियमन, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रचलित संस्था दर्ता ऐन, नियमावली र संस्थाको स्वीकृत विधान बमोजिम हुने गर्दछ ।
ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्र
अहिले राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित क्षमता कूल १,३३१ मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये सरकारको योगदान ६३६.६९ मेगावाट छ । यो मध्ये पनि ५८२ मेगावाट जलविद्युत्, ५३.४१ मेगावाट थर्मल र १.३५ मेगावाट सौर्य छ । सरकारको यो उपलब्धि १०९ वर्षको हो ।
यसैगरी, निजी क्षेत्रले हालसम्म ९८ आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमा ६९५ मेगावाट योगदान गरेको छ । यो उपलब्धि करिब २७ वर्षको हो । निजी क्षेत्रका करिब ३,२०२ मेगावाटका १३६ आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरी, २,१२५ मेगावाटका ११२ आयोजनाहरू विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा छन् । विद्युत् विकासबाट २,३६३.५ मेगावाटका ३५ आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुने तयारी छ । यसबाहेक १६,३७८ मेगावाटका २५१ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । ३२६ मेगावाटका १२ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएका छन् । साथै, ३७१.६१ मेगावाटका ४९ सोलार आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ ।
विद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी १० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ ।
जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रबाट भएको लागानी प्रतिमेगावाट औसत २० करोड रुपेयाँ मान्दा हाल सञ्चालनमा रहेका ६९५ मेगावाटमा १ खर्ब ३९ अर्ब लगानी देखिन्छ । निर्माणाधीन ३२०२ मेगावाटका आयोजनामा ६ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
पिपिए भएका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २ करोड रुपैयाँ मान्दा २१२५ मेगावाटमा ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी देखिन्छ । अध्ययन अनुमतिपत्र जारि भएका १६,३७२ मेगावाट आयोजनामा १ अर्ब लगानी देखिन्छ । यी सबैको विश्लेषण गर्दा विद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी १० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ ।
निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ७० प्रतिशत ऋण लगानी ६ खर्ब १६ अर्ब घटाउँदा जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको स्वपुँजी लगानी करिब ४ खर्ब ६ अर्ब भन्दा बढी छ । उल्लेखित पिपिए र अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजनामा हुने लगानीले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको लगानी ह्वात्तै बढ्नेछ ।
इपानमा ऊर्जा उत्पादकहरूको सहभागिता
अहिलेसम्म करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्वपुँजी लगानी गरेर देशलाई लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउने निजी क्षेत्र राज्यबाट भने अपहेलित हुँदै आएको छ । यसको मुख्य कारण सबै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू इपानमा आवद्ध भएर सशक्त आवाज उठाउन नसक्नु हो । प्रर्वद्धकहरू एकत्रित भएर आवाज उठाउन नसक्दा राज्यले दिने भनेका भ्याट अनुदान, पोस्टेड रेट, प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण, १० मेगावाटभन्दा सानाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी छुट जस्ता सुविधा पाउन सकिएको छैन ।
सञ्चालनमा रहेका ९८, निर्माणाधीन १३६, पिपिए भएका ११२, उत्पादन अनुमतिपत्र लिने पर्खाइमा रहेका २५ र अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका ३२६ समेत ६९७ जलविद्युत् तथा ४९ सोलार आयोजन गरी ७४७ आयोजना निजी क्षेत्रसँग छन् । तर, इपानमा हालसम्म जम्मा १७४ कम्पनी मात्रै आवद्ध छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण इपानले प्र र्वद्धकका समस्या बोक्न नसक्नु हो ।
आजसम्म इपानलाई सबै ऊर्जा प्रर्वद्धकको साझा संस्था बनाउने भन्दा केही व्यक्तिहरूको क्लब बनाउने मानिसकता हाबी भयो । केही समयअघिदेखि इपानको माध्यमबाट सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका समस्या उठान गरेपछि मात्रै इपानप्रति ऊर्जा उत्पादकहरूको चासो बढेर यो वर्ष मात्रै करिब सय कम्पनीले इपानको सदस्यता लिए । अब सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने बनाउन सबैभन्दा पहिले इपानमा सबै प्रवद्र्धकलाई संगठित गर्न जरुरी छ ।
इपान निर्वाचनका दुई विवाद
आफ्नो २० वर्षे इतिहासमा आजसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै आएको इपानमा यसपटक भने दुई प्यानल बनाएर निषेध शैलीमा दुवै पक्ष निर्वाचनमा होमीएका छन् । जुन व्यावसायिक हिसाबले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा नभएको, भर्खरै अगाडि बढ्दै गएको र राज्यका कारण लगानी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको क्षेत्र सरकारसँग लड्नुपर्नेमा आफैंबीच लड्नु शोभनीय हुँदै होइन । निर्वाचनका सन्र्दभमा इपानमा मुख्य दुई विवाद देखिएका छन् ।
१) प्रोक्सी सम्बन्धी विवाद : संस्था दार्ता ऐन, नियमावली, संस्थाको विधान कहीँ कतै नभएको प्रोक्सी सम्बन्धी व्यवस्था राखेर इपानले सूचना जारी गरियो । प्रक्रियागत त्रुटीले इपानको निर्वाचन नराम्रो विवादमा फसेको छ । निर्वाचनको अघिल्लो प्रोक्सी फर्म बदर गरिपाउँ भनी इपान निर्वाचन कार्यालयमा अध्यक्षका उम्मेदवार सुर्यप्रसाद अधिकारीले लिखित निवेदन दिएपछि समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र प्रोक्सी फर्मको कानुनी वैद्यतामा प्रश्न उठ्यो ।
निर्वाचन अधिकृतले, संस्थाका अध्यक्ष, र दुवै पक्षका उमेदवारबीच सिडब्लू रेष्टुरेन्ट कमलादीमा छलफल गराइरहँदा जिल्ला प्रसाशनले १५ गते तोकिएको निर्वाचन नगर्न आदेश दियो । यसो नभएको भए पनि प्रोक्सी विवादले निर्वाचन स्थगित हुने निश्चित जस्तै थियो ।
२) नेतृत्व सम्बन्धी विवाद : जम्मा १७६ जना मात्रै मतदाता रहेको इपानको नेतृत्व चयन सर्वसम्मत रूपमा हुन नसकेर दुई प्यानल बन्नु आफैमा दुःखद पक्ष हो । इपानलाई संघीय संरचना सहित बहुपदीय ढाँचामा लैजान विधान संशोधनका बेला कार्यसमितिको संख्या बढाउन नहुने कुरा उठ्यो । बरु आफूहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोले छोड्ने बताउँदै आएका साथीहरूमध्ये उमेदवारी दिन मिल्ने ९ जनामा ८ जनाले उमेदवारी दिए । यसले इपानमा नयाँ अनुहारलाई निषेध गर्ने पुरानो नेतृत्वका कारण दुई प्यानल खडा भएको हो ।
इपान संस्था दर्ता ऐन, नियमावली र संस्थाको स्वीकृत विधानको परिधिभित्र रही नियमन हुने संस्था हो । त्यसैले, यसभित्रका समस्याको समाधान ऐन, नियम, कानुन र व्यवसायीको हक, हित र मर्यादाभित्र रहेर निम्नानुसार समाधान गर्न सकिन्छ ।
१. प्रोक्सी विवाद समाधान : संस्था दर्ता ऐन, नियमावली स्वीकृत विधान अनुसार चल्ने संस्थामा प्रत्येक रितपूर्वक नवीकरण गरेका सदस्यमात्र मतदाता हुन्छन् । संगठित संस्था सदस्य रहेको हकमा ती संस्थाका आधिकारिक बैठकले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधिले मात्र साधारणसभामा भाग लिने, उम्मेदवार हुने, मतदान गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर, सम्बन्धित संस्थासँग सरोकार नभएका उनाउ व्यक्ति प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । प्रतिनिधिले प्रतिनिधि तोक्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रोक्सी सम्बन्धी विवाद समाधान निम्नानुसार गर्न सकिन्छ ।
विकल्प एक : संस्था दर्ता ऐन, नियमावली, संस्थाको विधान र निर्वाचन निर्देशिका कहीँ कतै नभएको प्रोक्सी पठाउने व्यवस्था सहित इपान निर्वाचन कार्यालयको असार १ गतेको सूचना स्वतः बदरभागी छ । किनभने, संस्थाको विधानको धारा ३० ले प्रचलित कानुनविपरितका व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त सूचनामा उल्लेखित व्यहोरा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम नियमन हुने संगठित संस्थाको हकमा मात्र लागू हुने हो । प्रोक्सी सम्बन्धी व्यवस्था नाफामुलक उद्देश्यले स्थापित संस्थामा शेयर वा हिस्साको आधारमा प्रोक्सीको संख्या निर्धारण हुन्छ । लगानीका आधारमा मतभारको हिस्ता प्राप्त गर्ने प्रोक्सी गैरनाफामुलक संस्थामा प्रचलनमा आउने कानुनी व्यवस्था कहीँ कतै छैन ।
ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको तर्फबाट आधिकारिक निर्णय गरी आधिकारिक प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । इपान निर्वाचन निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार कम्पनीले तोकेका व्यक्ति मतदाता रहने गरी इपान निर्वाचन कार्यालयबाट असार १० गते प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावली अनुसार निर्वाचन गराउनु पर्दछ ।
विकल्प दुई : प्रोक्सीको व्यवस्था नहुने सामाजिक संस्थामा संस्थागत (कम्पनी) मतदाता रहेको इपान निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आप्mनो कम्पनीको आधिकारिक निर्णयसहित पत्रमार्फत सदस्य कम्पनीहरूले मतदाता नामावलीमा आफ्नो तर्फबाट समावेश प्रतिनिधिको नाम परिवर्तन गर्न सूचना दिएर पुनः एक पटक मतदाता नामावलीमा प्रकाशन गर्ने र सोही आधारमा निर्वाचन गर्ने विकल्प हुन सक्छ ।
निर्वाचनमा उमेदवारी दिन मतदाता नामावलीमा अनिवार्य समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार उमेदवारी दर्ता भई अन्तिम उमेदवारको नामावली समेत प्रकाशन भइसकेकोले पुनः कम्पनीले आधिकारिक निर्णयबाट आफ्नो प्रतिनिधि परिवर्तन गर्दा यी उमेदवारी रहेको कम्पनीले प्रतिनिधि परिवर्तन गरको खण्डमा अन्तिम उमेदवारको हैसियत के हुने भन्ने कुराले कानुनी झमेला भने आउन सक्छ ।
२. नेतृत्व विवाद समाधान : करिब १० खर्ब २० अर्ब लगानी भइसकेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्था इपानको नेतृत्वमा पुग्न यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले आकांक्षा राख्नु स्वभाविक हो । अन्तिम उमेदवार प्रकाशन भएर असार १५ निर्वाचन हुनै लाग्दा असार १४ गते वेलुका जिल्ला प्रसाशनको आदेशबाट संस्थाको निर्वाचन रोकिएको छ ।
यसरी निर्वाचनको तयारी गर्दा कोभिड प्रोटोकल नमिचिने गरी निर्वाचन गर्ने सहमति सिडियो कार्यालयबाट लिएर निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगर्नु अघिल्लो कार्यसमितिको कमजोरी हो । त्यसैले कोभिड प्रोटोकल पूरा गरेर तत्कालै संस्थाको निर्वाचन गराउनतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्दछ । संस्थालाई कसैको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्ने थलो मात्रै ठानेर लामो समय वादविवाद गरेर नेतृत्व विहीन बनाइराख्नु हुँदैन ।
इपानको इतिहासमा पहिलो पटक प्यानल बनाएर दुई पक्ष भएर निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचन प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । भाग लिएपछि सबैले परिणाम स्विकार्नैपर्दछ । तर, निर्वाचनले सँधै सबै संस्थालाई मजबुत बनाउँछ भन्ने हुँदैन । प्यानलगत निर्वाचन हुँदा कहिले काहीँ प्यानल मतदानका कारणले संस्थाको लागि अत्यावश्यक अवश्यक व्यक्तिले निर्वाचन हार्ने सम्भावना समेत रहन्छ ।
त्यसैले दुवै प्यानलमा रहेका सक्षम व्यक्तिहरूलाई छनोट गरेर सर्वसम्मत प्रक्रियाबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेको खण्डमा यो क्षेत्रलाई सयोग पुग्नेछ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि निम्न विकल्प हुन सक्छन् ।
विकल्प एक : निर्वाचनमा प्यानल बनाएर उमेदवारी दिई उमेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा दुवै पक्षको सम्मानजनक सहभागिताका आधारमा मात्र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने अवस्था छ । जसका लागि अध्यक्ष पाउने पक्षले अध्यक्षसहित ७ जना र अध्यक्ष छाड्ने पक्षले उपाध्यक्ष सहित ८ जनाको हिसबाले पद बाँडफाँड गर्ने तथा अध्यक्ष छोड्नेलाई सल्लाहकार मनोनित गर्ने सहमति गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा दुबै पक्षले टिममा नपर्ने आफ्ना उमेदवारलाई सम्झाएर उमेदवारी फिर्ता गराउन सक्नुपर्दछ ।
विकल्प दुई : पुरानो कार्यसमितिमा रहेको व्यक्तिहरूले नयाँलाई अवसर दिने सहमति भएको खण्डमा सहजै सहमति बन्न सक्ने हुनाले संस्थामा आफूले हिजो जति योगदान दिइयो । एक पटक नयाँलाई योगादन गर्ने अवसर दिउँ भन्ने र उदार भावना राखेर पुरानो कार्यसमितिमा काम गरेर अहिले उमेदवार बनेका ८ जनाले छोड्ना साथ सममति भइहाल्छ ।
संस्थामा पुरनाको कार्यसमितिको अनुभवको मार्गदर्शन लागि निर्वतमान अध्यक्ष स्वतः सदस्य हुने व्यवस्थाले एक पटक नयाँलाई अवसर दिँदा पुरानो अनुभवको निरन्तरता सहित नयाँ जोसका साथ संस्था सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले पुराना साथीहरूले संस्थाको बृहत्तर हितका लागि आफ्नो सानो हित त्यागेर हृदय ठूलो बनाएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
विकल्प तीन : संस्थाका सल्लाहकार, पूर्वअध्यक्ष र सिनियर ऊर्जा उद्यमीले दुवै प्यानलका ३० उमेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा नेतृत्व लिन यिनै इच्छुक उमेदवारहरूको संयुक्त बैठकको आयोजना गरेर हरेक उमेदवारलाई तपाईंको उमेदवारी किन ? यसभन्दा अघि इपान र ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईंले भूमिका के थियो ? निर्वाचन जितेपछि के गर्ने योजना छ ? हामीले तपाईंलाई समावेश गरेर वा नगरेर टिम बनायौं भने तपाईंको प्रतिक्रिया के रहन्छ ? जस्ता प्रश्न गरेर उमेदवारबारे बुझ्ने र दुवै पक्षका आधा–आधा समेटेर नयाँ टिम घोषणा गर्ने गरी अभिभावकत्व निभाएको खण्डमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनसक्छ ।
विकल्प चार : प्रोक्सी सम्बन्धी विवाद नमिलेमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले कागजात मगाएर फाइल अध्यान गर्दै जाँदा इपानको कार्यालय सञ्चालनमा रहेको धेरै गल्ती कमजोरी बाहिर आउन सक्छ । जुन संस्थाको लागि राम्रो होइन । अहिले सरसर्ती हेर्दा संघ–संस्था दर्ता निवमावलीमा जुन जिल्लामा संस्था दर्ता भएको हो सोही जिल्लामा कार्यालय राख्नुपर्ने र अन्य जिल्लामा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपरे संघ–संस्था दर्ता भएको र शाखा वा सम्पर्क कार्यालय रहने जिल्ला प्रशासनबाट सहमति लिएर मात्रै खोल्न पाउनेमा इपानले सम्बन्धी ठाउँबाट सहमति लामो समयदेखि नलिई काठमाडौंमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको जुन कानुन विपरित छ ।
यसैगरी, संस्थाको नवीकरणको संस्थाको कार्यालय रहेको गलत ठेगाना उल्लेख गरेर सोही अनुसार वडा कार्यालयबाट लिएको सिफारिस, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित घर बहाल कर तिरेको र वास्तविक कार्यालय रहेको स्थान फरक भएकोले जस्ता कारणले जिल्ला प्रसाशनले इपानको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माथि शंका गरिएको छ । यसमा छानबिन गारउन र पूरै निर्वाचन प्रक्रिया बदर हुन सक्छ । आपसी विवाद समाधान नभएर यस्तो अवस्था आएको खण्डमा उमेदवारी दिएको उमेदवारभन्दा बाहिर गएर नयाँ उमेदवार खोजी गरिनुपर्दछ । तर, व्यवसायीको संस्था नेतृत्व सम्वन्धी विवादलाई लम्ब्याएर कानुनी जटिलतामा फसाउनु हुँदैन/होइन । त्यसैले, सबैले अ–आफ्नो हट त्यागेर तत्काल माथिका कुनै विकल्पमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
(दुलाल, आरती पावर कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक तथा इपानमा सचिव पदका उमेदवार हुन्)